Kanex GoPower Watch, iyo huru inotakurika yekuchaja base yeApple Watch | Ndinobva mac
Kanex GoPower Watch, iyo huru inotakurika yekuchaja base yeApple Watch
Tiri izvozvi nedambudziko netambo nemachaja patinofanirwa kutora rwendo kana kungoita kana tichiziva kuti tichava tiri pamba kwemazuva mashoma, saka vagadziri vemabhatiri ekunze vari kuisa mabhatiri ane zvigadzirwa zvinonakidza zvakadaro iyi Kanex GoPower Watch. Iri bhatiri rekunze iro chero mushandisi weApple Watch anogona kubhadharisa wachi yavo pasina kuve neyekutanga Apple tambo iripedyo, mukuwedzera Ino inotakurika charger bhatiri iri Apple yakasimbiswa kuti ishandiswe muwatchwatch, saka hatizove nezvinetso zvemhando ipi neipi.
Mune ino kesi, isu takatarisana nechigadzirwa chine chokwadi chekuve chakanakira avo vashandisi vanowanzoita mafupi asi achienderera nzendo uye nenzira iyi vanogona kudzivirira kudiwa kwekutakura imwe tambo musutukezi. Sekureva kwemugadziri weiri bhatiri rinotakurika reApple Watch, Iko 4.000 mAh kugona kune ino GoPower Watch kwaunozotipa isu kusvika kumatanhatu akazara ekuchaja macircule. Asi bhatiri rinotakurika iri zvakare MFi yakasimbiswa, zvinoreva kuti chiteshi chako che USB chiripo chinogona kushandiswa kuchaja yako iPhone.
Chinhu chakanaka ndechekuti kunyangwe isu tiine zvese zvishandiso zvakabatana panguva imwe chete, Ichi chishongedzo chinokoshesa kubhadharisa iyo Apple Watch pamusoro pechero chimwe chinhu chakabatana ne USB Uye ine chiratidzo cheLED chinotiratidza iwo bhatiri mazinga uye mamiriro ekuchaja. Tinogona kutaura kuti chinhu chikuru cheApple Watch umo hwaro hwese hunosanganisirwa.
Saka kana iwe uchida kuve nemaoko ako bhatiri rinotakurika rinotakurika rakagadziridzwa kuApple Watch uye iro rinokwanisa kuwedzera kubhadharisa mamwe madivayiri, iyi GoPower Watch inowanikwa kuti itenge nemutengo wema 99,95 euros pane yepamutemo Kanex webhusaiti. Isu tinokusiya iwe chigadzirwa chinongedzo pano chaipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kanex GoPower Watch, iyo huru inotakurika yekuchaja base yeApple Watch
Spotify inoda kutanga kubhadhara maartist mashoma
Trello, chirongwa chakanakira kuronga basa rako nemabasa